हो यो कथा होईन - नेपालबहस
गृहपृष्ठ कला/साहित्य कथा / उपन्यास हो यो कथा होईन
नामले मात्र उ कालुमान हो । उसका बानी बेहोरा काला, कपटी, फटाई, धुर्त, शोषण छंदै छैनन् । कालु अरुको दुःखलाई आफ्नै दुःख सम्झने र अरुको सुख देखेर पनि आफ्नो मन नकल्पिने हुँदा उसलाई आफ्नो र अरुको दुःखसुखमा कुनै पृथकता हुंदैनथ्यो । जीवनमा आईरहने उतारचढावले उसलाई न त हर्षित बनाउन सक्थ्यो, नत बिष्मात् नै ।
मानव जीवनका अहंम यी दुई पक्षले कालुमानलाई कुनै प्रभाव नपारेको भएपनि उसको आफ्नै दाजु मानप्रसादलाई भने अरु भन्दा आफु कसरी धनी हुने भन्ने कुराले उसलाई संधैनै पिरोली रहेको हुन्थ्यो । उसको एकमात्र सोचाई भनेको नै जसरी भएपनि धनोपार्जन गर्नु नै थियो । त्यसैले संधै नै उसको चिन्तनमनन धन प्राप्तिमा नै केन्द्रित रहेको हुन्थ्यो ।
मानप्रसादको चतुर्याईं देखेर गाँउका मान्छे सबै छक्क पर्दथे र साथै चिन्तित पनि । गाउँका मानिसहरुको सम्पत्ति आफ्नो हात पारेको देख्दा उनीहरुमा एक किसिमको त्रास र डर पैदा हुन्थ्यो ताकी उनीहरुको सम्पत्ति पनि नकि त्यसै गरी हडपियोस् । धूर्त मानप्रसादको षड्यन्त्रमा पर्न नपरोस् भनी उनीहरु पर पर हुन्थे, यद्यपी यो त्यति सम्भव पनि थिएन । जे जस्तो किसिमले उसले धन सम्पत्ति जोडेको भएपनि धन सम्पत्तिको अगाडि गाउँका मानिसहरु उ प्रति नतमष्तक नै हुनुपर्दथ्यो, बाध्य भएर ।
जसरी कुनै शिकारीले रुखको टुप्पोमा बसेको चराले थाहै नपाउने गरी भुईंका पातसमेत नहल्लाई चरालाई बन्दुकले गोली प्रहार गरी मारेको हुन्छ , त्यस्तै प्रकारले मानप्रसादले धेरै गाँउलेहरुको सम्पत्ति थाहै नपाउने गरी आफ्नो नाउमा बनाएको हुन्थ्यो । मानप्रसादको यस प्रकारको गतिबिधि प्रत्येक बर्ष बढीरहेकै हुन्थ्यो । यस प्रकारले उसले आफूलाई धनी बनाउने कार्य गरी नै रहेको हुन्थ्यो । धनी बन्ने उसको एकमात्र लालसा थियो । हर पलपलमा उसको ध्यान त्यता मात्र केन्द्रिकृत भएको हुन्थ्यो ।
सामान्यतया गाँउघरमा दाजुभाई बीच अंशबण्डा गर्दा सबै दाजुभाईलाई बराबर अंश लगाई सानो कान्छो भाईलाई अंश रोजाउने चलन रहेको हुन्छ । तर मानप्रसादले नत अंश बराबर लगायो, नत भाईलाई अंश रोज्न नै दियो । उसले एकलौटी रुपमा अरु दाजुभाईको भन्दा आफूलाई बढि अंश राखेको थियो भने राम्रो राम्रो जग्गा आफ्नै नाममा राखेका पनि थियो ।
धन कमाउने उत्सर्ग ईच्छा उसमा रहेको हुँदा उसले को आफ्नो को पराई भन्दैनथ्यो । धनले मान्छेलाई घमण्डी र अरु भन्दा उच्च तहको बनाउंछ भन्ने कुरामा उसँग सतप्रशित मिलेको हुन्थ्यो । अरुको सम्पत्ति हडप्ने बिषयमा त उ एकप्रकारले अभ्यस्तनै भैसकेको थियो । अरुको त के कुरा गर्ने उसका आफ्नै दाजुभाईहरुको समेत जग्गाजमिन आफ्नो नाममा बनाई सकेको थियो ।
एउटै रगत र एउटै लाम्टो चुसी आएको सानोभाईको अंश समेत उसले आफ्नो नाममा बनाएको कुरा गाँउघरमा थाहा भएपनि उसलाई त्यसको कुनै परवाह थिएन । सामान्यतया गाँउघरमा दाजुभाई बीच अंशबण्डा गर्दा सबै दाजुभाईलाई बराबर अंश लगाई सानो कान्छो भाईलाई अंश रोजाउने चलन रहेको हुन्छ । तर मानप्रसादले नत अंश बराबर लगायो, नत भाईलाई अंश रोज्न नै दियो । उसले एकलौटी रुपमा अरु दाजुभाईको भन्दा आफूलाई बढि अंश राखेको थियो भने राम्रो राम्रो जग्गा आफ्नै नाममा राखेका पनि थियो ।
यति मात्र गरेर उसको चित्त कहाँ पुग्थ्यो ? उसले आफ्नी बुढी आमालाई ललाई फुल्याई गरेर आमाको नाममा रहेको जग्गाजमिन पनि आफ्नै नाममा बनाई सकेको थियो । उ यतिसम्म कुरा बनाउन खप्पिस थियो की आमाको नाममा रहेको सम्मूर्ण जग्गाजमिन आफ्नो नाममा गर्दा अड्डामा गएर यस्तो बोल्नु पर्छ भनी बुढी आमालाई उसले सिकाई सकेको थियो ।
एक बिधवा बृध्द महिलाको सम्पूर्ण सम्पत्ति आफ्नो नाममा गराउंदा सम्पत्ति जति छोराको नाममा भएपछि भविष्यमा बुढी आमाले दुःख नपाउन् भनी अड्डा अदालतबाट तपाईले सबै सम्पत्ति एउटै छोरालाई दिंदा अरु छोराहरुले असंतुष्टी दर्शाई आमाको सम्पत्तिमा हामीहरुको पनि हक लाग्छ,, हामीलाई पनि आमाको सम्पत्ति चाहिन्छ र हामी पनि आमालाई पालनपोषण गर्न सक्दछौं भनेको अबस्थामा तपाई के गर्नु हुन्छ भनी सोधनी गर्दा बुढी आमाले यहि एउटा मात्र छोरा हो । अरु छोराहरु सबै मरी सके , म बुढीलाई भने काल आएन । जति सक्यो मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बुढी आमाले जबाफ दिएकी थिईन् ।
यती मात्र के भन्न भ्याएकी थिईन बुढी आमाले, उसै त मानप्रसाद चतुरो, त्यसमा पनि आफूले सिकाएको सबै कुरा बुढी आमाले राम्रोसँग मिलाएर भन्दा त उ खुशीले गद्गद् भएको थियो । उसको शरीर र अनुहारको आकृतिले उसको मनमा आएको खुशीको तरंग प्रष्ट देखिएको थियो । उसले मनमनै आफूलाई धन्य सम्झिएको थियो । आफूले बुनेको जालमा माछो परे पछि जसरी मछुवाको मन खुशीको चरम सीमामा पुगेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले मानप्रसादको मन पनि खुशीले गद्गद् भएको थियो , जसरी एउटा शिकारीले जंगलमा बसेको चरालाई मार्दा खुशी हुन्छ,, मछुवाले ठूलो माछा जालमा पार्दा जसरी खुशी भएको हुन्छ । त्यहि किसिमले मानप्रसाद खुशी भएको थियो ।
आमाको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति हडप्ने दाउले आमालाई बिभिन्न प्रकारले लल्याई–फुल्याई र अनुनयबिनय गरेर यसअघि पनि उसले आमाको मन जित्ने प्रयास गरी नै रहेको थियो । तपाईको नाममा रहेको सम्पूर्ण जमिन हदमुनीको राजीनामा गरेर मलाई दिनुहोस् । हदमुनीको गर्दा केही हुंदैन । १०० रुपैयाँमा मलाई दिंदा के बिग्रिन्छ ? मलाई मेरी आमाले दिनु भएको हो भनेर तपाईंको अन्त्यपछि मैले अरुको अगाडि शानदारसँग छाती फुलाएर कुरा गर्न सक्छु भनि आमाको मन जित्न पनि सफल भएको थियो, मानप्रसाद ।
पापीको मन प्रायश्चित भने झै उसले हदमुनीका घरायसी कागज बलियो हुन्छ कि हुंदैन भनी वकिलसँग सल्लाह गर्न गएको थियो । वकिलले अड्डामा गएर गरेको कागज बाहेक अन्य घरायसी कागजको बैध्यता रहदैन भनेपछि उ छांगाबाट खसेको जस्तो भयो । उ अब यस बिषयमा फेरी चिन्तित हुंदै गयो र कसरी षडयन्त्र रच्ने भन्ने बिषयमा आफूलार्इृ ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यो ।
हुन पनि हो झुटको खेती गर्ने र फटयई गर्ने मानिसहरुलाई नत रातमा निद्रा लागेको हुन्छ नत दिनमा भोकनै लागेको हुन्छ । आफूले गर्न लागेको षडयन्त्र सफल नहुन्जेलसम्म उनीहरु पागल जस्तै भएका हुन्छन् । ती मध्येकै एकपात्रको रुपमा मानप्रसादलाई लिन सकिन्छ । उसलाई घरायसी कागजले नहुने भएपछि कानूनी सल्लाहको लागि धेरैसँग उसले सल्लाह र परामर्श लिएको पनि थियो ।
उसको मुख्य उदेश्य भनेको बुढी आमाको सम्पत्ति हडप्नु थियो, त्यो हडपी सकेपछि बुढी आमाको के मतलव भयो र उसलाई ?। अब उसले बुढी आमालाई गाली मात्र गरेन की खान, लाउन र स्याहारसम्भार गर्न पनि छोडिदिएको थियो । आफ्नो जन्म दिने आमालाई अनेक प्रलोभन देखाई सम्पत्ति हडप्ने, अनि उनैलाई हेला गरेर अमानविय ब्यवहार गर्ने । कस्तो विचारले जरो गाढेको छ हाम्रो समाजमा ।
अब फेरी उसले बुढी आमालाई लल्याईफुल्याई गर्न थालेको थियो । आमा तपाईले मलाई सबै सम्पत्ति दिनु भएको हो , तर घरायसी कागजले प्रमाण नपुग्ने भएको हुँदा अब फेरी अड्डा जानु पर्यो । म तपाईलाई आरामपूर्बक लिएर जान्छु र बरु तपाईलाई बाटोमा जाँदा अप्ठेरो हुन्छ भने बीच बाटोमा बास बसेर बिस्तारै जाउंला । म भएपछि तपाईलाई के को चिन्ता भयो र ? । बिरामी हुनु भयो भने औषधीमूलो र स्याहारसुसार गर्ने म छदैछु , केही पीर गर्नु पर्दैन । अहिलेसम्म मैले तपाईलाई पालन पोषण गरी आएकै छु । पछि पनि तपाईंको हेर विचार गर्ने म नै हो । दाईभाईले हेर बिचार गर्ने हैनन् । आमा, त्यसकारण तपाईंले ममाथि दया गर्नु पर्यो भनी अनुनय बिनय गरेर आमाको मन पगाल्न तीर लाग्यो । आमाले पनि होतनी एकपटक मैले उसलाई दिईसकको हुँ, अहिले अड्डामा गएर फेरी पक्का गरेर दिन के भयाे र भन्ने विचार मनमा आयो र उनले अड्डामा गएर मानप्रसादको नाममा जग्गा पास गरीदिएकी थिईन् ।
जति जति समय बित्दै जान्थ्यो उति उति मानप्रसादको मन खुशीले गद्गद् हुंदै जान्थ्यो । जब बुढी आमा झन् झन् कमजोर हुंदै गईन्, उनीलाई स्याहारसुसार गर्नु परेको हुँदा बुढी आमा प्रति उ रिसाउन र गालीगलौज गर्न थाल्यो । उसको मुख्य उदेश्य भनेको बुढी आमाको सम्पत्ति हडप्नु थियो, त्यो हडपी सकेपछि बुढी आमाको के मतलव भयो र उसलाई ?। अब उसले बुढी आमालाई गाली मात्र गरेन की खान, लाउन र स्याहारसम्भार गर्न पनि छोडिदिएको थियो । आफ्नो जन्म दिने आमालाई अनेक प्रलोभन देखाई सम्पत्ति हडप्ने, अनि उनैलाई हेला गरेर अमानविय ब्यवहार गर्ने । कस्तो विचारले जरो गाढेको छ हाम्रो समाजमा ।
मानप्रसादले आफूलाई जन्मदिई हुर्काई, बढाई, पढाई नौजवान बनाएको छोराले यस्तो ब्यवहार गर्ला भन्ने कहिल्यै पनि चिताएकी थिईनन् । तर त्यस्तो हुन सकेन र अहिले उनीलाई भाडा माझेर रक्ष्यानमा फया्ंकिएको लुंडो जस्तो बनाई दिएको छ, मानप्रसादले । हुन त अरु छोराहरुले बुढी आमाको सम्पत्ति नभए पनि पाल्ने नै छन् । तर पनि भएभरको सम्पत्ति मानप्रसादले खाने अरु छोराहरु कहाँ गएर बस्नु पर्दा बुढी आमालाई नराम्रो लाग्नु स्वभाबिकै थियो ।
बुढो शरीर, त्यसमा पनि आँखाले काम गर्न छोडेको र निकै गढेर भित्रसम्म पुगेका, कान नसुन्ने, निधारमा चाउरी भएको, टाउकोमा कपालको एउटा रौं पनि कालो नदेखिने , सबै सेताम्बे भएकी , शरीरमा भएको सबै छालाले ठाउँ छोडेर छाला तुर्लुङ् परेको , हात गोडाहरु सुकेर हड्डी मात्र देखिएको , टाउको घुंडामा राखेर धान्न परेको अबस्था देख्दा जो कोहीको मन दुख्नु स्वभाविकै हो । बृध्द आमाको यस्तो अबस्था देखिरहंदा पनि आफूलाई जन्मदिने आमा प्रति सहानुभूतिसम्म नराख्ने मानप्रसादको मन कति सम्म निर्दयी रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिने थियो नै । यस्ता छोराहरु जन्मनु भन्दा नजन्मिनु नै ठिक हो भन्ने कुरा बुढी आमालाई लाग्नु स्वभाविकै भए पनि प्राकृतिक नियमको बिरुध्दमा जान सकिने अबस्था पनि त हुंदैनथ्यो ।
बुढी आमा दिन प्रतिदिन कमजोर हुंदै गएपनि यस बारे मानप्रसादलाई कुनै चिन्ता थिएन । त्यसैकारणले गर्दा बुढी आमाको बिषयमा कसैले केही भने पनि सुनेको नसुनेझै गरी अर्कै बाटो लागेको हुन्थ्यो अथवा प्रसंग बदलेको हुन्थ्यो । बुढी आमा भने एउटै कोख र समान प्रसब बेदनाबाट जन्मिएका सन्तान प्रति बराबरी माया दर्शाएकी हुन्थिन् । तर पनि मानप्रसादले आमाको माया देखावटी र नक्कली भनेर हल्ला पनि मच्चाउने गर्दथ्यो । उसको नराम्रो हल्लाले आमाको मन झन् खिन्न हुन्थ्यो ।
पशुपंक्षीले त आफ्ना सन्तानलाई कसरी माया गरेका हुन्छन् भने कुनैपनि बाबु आमाले आफ्ना सन्तानलाई माया दिनु कुन ठूलो कुरा थियो र ?। तर मानप्रसादले आमाको मायालाई नक्कली नाटकको रुपमा लिएर हल्ला गरेर हिडेको देख्दा बुढी आमा दिन प्रतिदिन झन् शिथिल हुंंदै गईन् । तैपनि मानप्रसाद भने आमा प्रति एकरत्ति पनि संवेदनशिल हुन सकेन । भनिन्छ, मानिस मरेपछि जसरी जुम्राले मृत शरीरलाई छाड्दछ , त्यसैगरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति भएपछि मान प्रसादले अमासँगको सम्बन्ध समेत तोडेको थियो ।
नौ मैनासम्म कोखमा राखेको , बालक जन्मिएपछि खुशीको सीमा नरहेकोे, हुर्काउंदै जांदा तोते बोली सुन्दा र टुकुटुकु आंगनमा हिडेको र रमाएको दृश्य अझैपनि उनको मस्तिष्कमा ताजै लागेको हुन्छ । यसरी सम्झदै र गम्दै जांदा जीवन प्रतिनै बितृष्णा जागेर आउंछ उनलाई ।
अहिले आएर बुढी आमालाई पूर्वस्मृतिको याद गर्दा पश्चाताप पनि लागेको छ । मानप्रसादको ललाईफलाईमा परेर भए भरको आफ्नो सम्पत्ति उसलाई सुम्पनु र उसले गरेका कुकृत्यहरुको बारे थाहा भएर पनि अरुलाई नभनेकोमा । जे भएपनि बितेका कुरा गईसके । अब बिगतलाई कोट्याएर के गर्नु भनेर उनी अहिले आएर एक्लै झोक्रिएर बसिरहेकी हुन्छिन् । पुराना कुरा केलाउंदै जांदा उनी मनभित्र भित्रै गम्दै जान्छिन् । छोरो भएर पनि मानप्रसाद जस्तो भयो भने के काम भयो र ?
यस्तो छोरो हुनु भन्दा त नहुनु नै बेस जस्तो लागेको छ उनलाई । अरुसँग कुरा गर्दा पनि यस्तै बिलौला गरेर बसेकी हुन्छिन् बुढी आमा । अतीतलाई सम्झदा सम्झिदै आफैलाई धिक्कार्न पुग्छिन् । नौ मैनासम्म कोखमा राखेको , बालक जन्मिएपछि खुशीको सीमा नरहेकोे, हुर्काउंदै जांदा तोते बोली सुन्दा र टुकुटुकु आंगनमा हिडेको र रमाएको दृश्य अझैपनि उनको मस्तिष्कमा ताजै लागेको हुन्छ । यसरी सम्झदै र गम्दै जांदा जीवन प्रतिनै बितृष्णा जागेर आउंछ उनलाई ।
जीवनमा यस्तो होला भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेकी थिईनन् उनले । संयुक्त परिवारमा बसेर एकआपसमा स्नेह गरेर रहने बुढी आमाको ईच्छामा चोट पुर्याउने पनि अरु कोही नभएर उही आफ्नै छोरो मानप्रसाद नै थियो । उ केही जान्ने बुझ्ने भए देखिनै नराम्रो काममा मात्र लागेको हुन्थ्यो । अरुलाई दुःख दिने र त्यसबाट आफूले फाईदा लिने काम मात्र उसले गर्ने हुँदा धेरै मानिस उदेखि पर पर हुने गर्दथे । तैपनि बिभिन्न बहाना गरेर सिधासाधा मानिसलाई उसले आफ्नो षड्यन्त्रमा पारेकै हुन्थ्यो ।
मानिसको जीवनमा बिभिन्न भोगाई हुन्छन् । कसैले आफ्नी आमालाई आफ्नो मुटु भन्दा पनि प्रिय ठानेका हुन्छन् भने कसैले आँखाको कसिंगर जस्तो ठानेका पनि हुन्छन् । मानप्रसाद यहि कोटीमा परेको देख्दा बुढी आमा छक्क परेकी हुन्छिन् र यस्तो जन्माएकोमा आफैलाई धिक्कार्न पुग्छिन् ।
आमा थला परेको थाहा पाए देखिनै मानप्रसाद कहाँ गयो कसैलाई थाहै भएन । आमा मरी हाल्छिन्, उनको काजक्रिया गर्नुपर्छ र केही पैसा पनि खर्च हुन्छ भन्ने विचारले उसले घर छोडेको धेरै दिन भएको थियो । आमाले अरु सबै सन्तानलाई अन्तिम अबस्थामा देखेकी भए पनि मानप्रसादलाई नदेखेकोमा खिन्नता लागेको संकेत उनको अनुहारले प्रष्ट रुपमा देखाएको थियो ।
बुढो भएपछि आँगन पनि परदेश हुन्छ भन्ने कुरा ठिकै रहेछ जस्तो लागेको छ उनलाई । शरीरका सबै अंगले काम दिन छोडेपछि अब कति पो बांचिएला जस्तो लागेको छ उनलाई । चांडो मर्न पाए जस्तो लागेको भएपनि मानिसले चिताएको जस्तो कहां हुन्छ र ? आफूले चिताए जस्तो भएको भए, मानप्रसाद जस्तो छोराको जन्म पो कहां हुन्थ्यो र ? अरुका छोराहरुले आफ्नी आमालाई माया गरेको देख्दा उनलाई अनौठो लागेको हुन्छ र आफ्नो छोरो मानप्रसादलाई देख्दा आफैंलाई धिक्कारेकी हुन्छिन् ।
उमेरले नेटो काटी सकेको र शरीरले पनि दिनगन्ति गरीरहेको हुँदा यस धरतीमा अब उनको बसाई लामो अबधिको छैन भन्ने कुरा धेरैले अडकल गरी सकेका थिए । यद्यपी बुढी आमामा भने बाच्ने रहर पलाई नै रहेको थियो । एक दुई दिन गर्दा गर्दै उनी गल्दै गईन् । ईष्टमित्र, नाताकुटुम्ब, आफन्तहरु भेट्न आईनै रहेका थिए । तर मानप्रसाद भने आफूलाई जन्म दिने आमालाई बोलाउन एकपटक पनि आएन ।
अन्तिम अबस्थामा पुग्दासम्म पनि आमाले भने आफ्ना सबै सन्तानलाई खोजी गरी रहेकै थिईन् । आमा थला परेको थाहा पाए देखिनै मानप्रसाद कहाँ गयो कसैलाई थाहै भएन । आमा मरी हाल्छिन्, उनको काजक्रिया गर्नुपर्छ र केही पैसा पनि खर्च हुन्छ भन्ने विचारले उसले घर छोडेको धेरै दिन भएको थियो । आमाले अरु सबै सन्तानलाई अन्तिम अबस्थामा देखेकी भए पनि मानप्रसादलाई नदेखेकोमा खिन्नता लागेको संकेत उनको अनुहारले प्रष्ट रुपमा देखाएको थियो ।
बिरामी भएर थलापरेको केही दिन पश्चात बुढी आमाको मृत्यु भयो । गाँउघरका सबै मानिस जम्मा भए र अन्तिम संस्कारको लागि घाटतिर लास लिएर गए । तर मानप्रसाद भने अन्तिम संस्कारमा पनि आएन । अरु छोराहरुले आमाको दाह संस्कार एवं आफ्नो परम्परा अनुसार गर्नुपर्ने काम गरे । धनसम्पत्तिको लोभले मानप्रसादले पहिले बुढी आमालाई ललाई फुल्याई गरेर सम्पत्ति हात लगायो ।
अन्तिम अबस्थामा आमाको काजक्रियासम्म नगरेर एउटा राक्षसीको उदाहरण देखाएको घटनाले सबैलाई अचम्म पारेको थियो । हो, त्यसैले यो कथा नभएर बास्तविक घटना नै हो । हाम्रो समाजमा वास्तवमै यस्ता अनगिन्ति घटना घटिनै रहेका हुन्छन् । (लेखक पराजुली नेपाल सरकारका अवकाश प्राप्त उपसचिव हुन् । उनका थुप्रै पुस्तक,लेखरचना तथा कथा, कविता र निबन्धहरु प्रकाशित छन् । स.)
अघिल्लो लेखखत्रीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा नवलपुर प्रहरीद्धारा ४ जना पक्राउ
अर्को लेखलक्ष्मी बैंकको ११३औँ शाखा सप्तरीको राजविराजमा
कैदीबन्दीका १७ सन्तानलाई स्वीटर, झोला र शैक्षिक सामग्री वितरण